Industry Dynamics Abavelisi & Ababoneleli - China Industry Dynamics Factory
Tiles Porcelain okuphekwe
Tiles Porcelain olukhazimlisiweyo
Tiles Carpet ehonjisiweyo
Stainless Kitchen ukuthi xumbu kwayo
iithayile terrazzo Unique-eyohlobo olulodwa
ngomphathi ku 18-06-26
Ukuzoba oluvela terrazzo yemveli Italy kunye ekuhlanganiseni izinto yefashoni ubugcisa banamhla nabo bonke-ngokusebenzisa ubugcisa umzimba unique, uyilo kunye nokusebenza terrazzo zemveli kuye kwaphuculwa kakhulu. -ngenxa imveliso ezizodwa terrazzo rejuvenates indlela ...
Kutheni sifanele sisebenzise ithayile ethambileyo ibengezela?
Kwakukho uphando yabanjwa phakathi 200 abathungi uhombiso ekhaya kunye nabanini real estate 80 abaphezulu malunga kwisifundo - Ucinga ukuba kutheni becinga ntoni na mfanelo ithayile ogqityiweyo. 80% of udliwano kukholiswa oku entsha mkhuba. Njengoko indlela babona ngayo, phezulu ziyabuyiseleka tilesmight isizathu ngokugqithiseleyo olubonakalayo inkanuko etha nge ...
Yintoni Tile plain mihla ceramic?
NO.15-16, B Building, Shiwan Sanitary Centre, District Chanchen, Foshan City, Guangdong kwiPhondo, China